Abatsha Bathi Akulazibuse Oqotho eZimbabwe
EleZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengakwamanye amazwe kuzwekazi le Africa.
Lokhu kuvezwe ngontanga emhlanganweni wokuhlaziya ngomkhankaso wokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele phansi kohlelo oluphawulwe nyakenye olwe Declaration of Peace and Ceastion of War (DPCW), owenzelwe emawofisini ommeli weMelika eZimbabwe.
UNkosazana Santi Mkhwananzi
Umqondisi wenhlanganiso ye PYD, uMnu. Claris Madhuku, utshele lumhlangano, oqoqwe ngabenhlanganiso ye International Peace Youth Group (IPYG), ukuba eleZimbabwe lilokhe libhekane lenkinga ezinengi, okumele zilungisiswe ukuze kube khona ukuthula uqobo.
Omunye wabasakhulayo ovele ekholitshini le University ye Zimbabwe, uSanti Mkhwananzi, uvumelana lombono othi eleZimbabwe lokhe lingakakutholi ukuthula uqobo lanxa ingekho impi elizweni.
Abomanyano wenhlanganiso zabontanga emhlabeni jikelele, eye International Peace Youth Group, bathi kungafezeka lokho abangakho kube lokuthula uqobo umhlaba wonke nxa abantu bengaguqula imikhuba lemicabango yabo lakundlela ababona ngayo abanye babo umhlaba wonke.